Isizathu Esilula Ukuba I-Google Ayikwazi Ukuma Indawo Yakho - Impendulo nguSomalt Expert
Ukuba ukholelwa ukuba igama eliphambili lokugxila kubalulekile kwi-SEO, wenza iphutha elikhulu! Ukugxilongwa kwegama elingundoqo ligama elichaza ukuba usebenzisa amagama amaninzi ngaphandle kokuhlawula umgangatho. Ngamanye amazwi, singatsho ukuba kubandakanya ukusetyenziswa kwamagama amaninzi kunye namazwi angenanto engqalileyo kunye nenjongo ye-webmasters kukuzisa izithuthi ezininzi, ukuphucula injini yosesho usezingeni lawo. Ngelishwa, igama eliphambili lokugxila likhokelela iGoogle ukuba ihlawulise ijehlwayo kwiwebhusayithi yakho.
Nangona kunjalo, u-Igor Gamanenko, i-12 (Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uthi unako ukuphepha le nhlawulo ngokunamathela kwi-intetho ebalulekileyo - acer laptop leasing. Akufanele usebenzise amagama amaninzi kunye namazwi njengoko aya kugqitywa njengogaxekile ngeenjini zokukhangela. Kwakhona, akufanele ulibale ukuba i-Google ayithathi igama elingundoqo eligxothayo. Enyanisweni, sele iphumelele izicwangciso eziliqela ukuqinisekisa ukuba onke amanqaku abhaliwe ngokuhamba kakuhle, ulwimi, kwaye akukho nto yokufaka amagama angundoqo. Apha siza kukuxelela indlela yokuphepha ukugxinwa kwegama elingundoqo kwaye ugcine umgangatho womxholo wakho kwizinga elifanelekileyo.
Iyini igama elingundoqo igama lokucoca?
Ngaphambi kokuba sixoxe nantoni enye into, makhe ndikuxelele ukuba igama eliphambili lokugxilwa kukusetyenziswa okungafanelekanga kwamagama angundoqo kunye namaqela kumxholo wakho..Qinisekisa ukuba amanqaku akho abhaliwe kakuhle kwaye ayahambelana nokubalwa kwamagama kwiinjongo ze-SEO. Kufuneka uqonde kwakhona iingcamango ezisisiseko zegama elingundoqo. Xa uchwepheshe we-SEO esebenza, uzama ukufaka izinto eziphambili zokuphucula umgangatho wewebhusayithi yakho. Enyanisweni, iindlela ezinjalo ezinokuzondla zingenise umxholo wakho phezulu, kodwa iziphumo azize zihlale zihlala ixesha elide.
Xa isayithi lakho lifika kumaphepha okuqala aseGoogle, injini yokukhangela iyakuphonononga umgangatho wayo kwaye iyakwehlisa ukuba uyifakile ngamagama angundoqo. Yingakho akufanele uqeshe uchwepheshe we-SEO obhala ngokubhala amanqaku angenangqiqo kwaye uhlawule ngakumbi ingqalelo yegama elingundoqo elingaphezulu komgangatho.
Ngokutsho kwe-Wikipedia, i-Google ibona igama elingundoqo ligxotha njengento engathembekanga. Ngoko ke, kubalulekile kubalobi be-freelance kunye nabathengi bokuqukethwe ukuqinisekisa ukulingana kwamanqaku abhaliweyo. Bamele bagcine amagama angundoqo kumgangatho obuncinane kwaye bazame ukubonelela abasebenzisi ngolwazi oluninzi noluncedo.
Igama elingundoqo elingumyinge wepesenti:
Ukuba udidekile malunga neepesenti yokugxilwa kwegama elingundoqo, makhe ndikuxelele ukuba amanye amagama asetyenziswayo kwinqaku kufuneka ahambelane nemimiselo nemigaqo yeGoogle. Ngokuqhelekileyo, ii-SEOs zincoma ukuba ukuxinwa kwegama eliphambili akufanele kube ngaphezu kweepesenti ezimbini kwaye amagama angundoqo angabonakalisa amanqaku akho. Unako ukubala ubungqina begama elingundoqo kunye nezixhobo ezininzi. Sikucebisa ukuba ungasebenzisi igama elingundoqo elingaphezu kwamaxesha amabini kwinqaku legama le-300. Unako ukwandisa amagama okubalwa kwaye ufake igama elifanayo elingundoqo ukususela kwiine ukuya kwiihlandlo ezihlanu, kodwa lowo ngumlinganiselo ophezulu.
I-Moz.com yindawo ekhethekileyo ye-SEO, enika izicombululo kuzo zonke iingxaki ze-SEO. Unokwenza i-akhawunti kule ndawo uze ubuze imibuzo. Unokufumana kwakhona ukubhaliselwa kwayo kwaye ukhupha iiplagi ezinokuthi zilandele indawo yakho.